Enye yeengxaki eziphambili phakathi komntu kunye nabanye abameli belizwe lezilwanyana kukukwazi ukuthetha. Ngokwezinga lokuphuhliswa kwentetho, umntu unokugweba nokuphuhliswa kwengqondo yomntu ngokupheleleyo. Ngoko ke, abazali abaninzi banomdla xa umntwana eqala ukuthetha. Oko kukuthi, xa izandi kunye nokudibanisa okuthethwa ngumntwana kunokubakho njengentetho. Usana olusandula kuzalwa, xa elambile, xa engakhululekile okanye enento ebuhlungu, uqala ukumemeza, kodwa oku akuyintetho. Emva koko, lo mkhuba uqobo, umzekelo, kunye nenja, ukuba ayinakondla okanye ivalwe kwigumbi elingaqhelekanga.
Ngoko ke yintoni yobudala beminyaka yabantwana, xa ungathetha malunga nokuqala kokuthetha? Ngezansi iimiqathango eziqhelekileyo ezisetyenziselwa iingcali zezingane ukuvavanya ikhono lomlomo lomntwana.
Ekupheleni kweenyanga ezisixhenxe, umntwana uqala ukuchaza izilwanyana: ewe, ewe, ewe, nge-pa-pa-pa, njl. Xa umntwana ejika unyaka, uqala ukubiza amagama amancinci okuqala. Njengomthetho, la magama aqukethe isilagidi enye. Kwiinyanga ezintandathu kamva, abazali banokuva amacebiso avela kumntwana wabo oza kuba namazwi amabini okanye amathathu alula. Ukufikelela kwiminyaka emithathu yobomi kukho ukuphuculwa kwintetho yomntwana, kwaye ngeminyaka emithathu, njengomthetho, umntwana angakwazi ukuvakalisa amabinzana alula. Kwiminyaka emine umntwana usenokwakha izakhiwo ezinzima.
Nangona kunjalo, kukho "abantu abathulileyo" abafuni ukuqala ukuthetha kwiminyaka emithathu, nangona aba bantu bengenayo ingxaki kunye neengqondo, okanye ngezwi, okanye nge-hearing aid. Kutheni oku kwenzekayo? Ziziphi izizathu ezithintela ukubiza amagama? Ingaba isizathu kubazali abayayiqonda umntwana ngesigama?
Indoda yintlalo yoluntu. Inkqubo yokufunda ithathwa ngokulandelwa. Ngako oko, umntwana ufuna ukuhlala eva intetho kwaye abandakanyeke kule nkqubo. Le yinyani eyaziwayo. Nangona kunjalo, kwenzeka ukuba nangengxoxo eqhubekayo kunye nosana, umntwana unenkani uyathula kwaye akazami ukuthetha nawaphi na amagama. Abaninzi banokumangaliswa, kodwa oko kwenzeka ngenxa yokuba inyane lingazi ukuba lenze ntoni: umqondiso awuveli kwintliziyo yakhe kumatshini wakhe omlomo. Umntwana uya kuqala ukuthetha kuphela xa indawo yokuthetha intetho iqala ukufaka entloko yakhe. Isiphetho sibonisa: ukuze umntwana athethe, kubalulekile ukuphuhlisa le ndawo. Kodwa oko kungenziwa njani?
Ukuba ufunda ngokubanzi iinkalo zengqondo, unokubona ukuba indawo yomdla ikhona eduze kwesiza esinika ukuhamba komntu. Enyanisweni, indawo yomdla inxalenye yale ndawo. Ngoko ke, amandla okuthetha axhomekeke ekuphuculeni kakuhle izakhono zombane zentsana.
Oososayensi baqhuba izifundo apho kufunyaniswe ukuba kukho ubudlelwane phakathi kwejubane lentetho kunye nomsebenzi wemoto wabantwana, ngokuchanekileyo, ukuphuhliswa kweminwe nezandla.
Kwiinyanga ezintlanu, umntwana uqala ukuchasana nesithupha kwisinye. Into ayifumayo ukususela ngoku, kungekhona ngesandla sakhe, kodwa ngeminwe yakhe. Emva kokuphelelwa kweenyanga ezimbini, i-crumb iqala ukubiza iibllabha zokuqala. Kwiinyanga ezisibhozo okanye ezithoba, umntwana uqala ukuthatha izinto ngoncedo lweminwe emibili, kwaye unyaka angakwazi ukuwabiza ngamazwi okuqala. Iminyaka yokuqala yobomi bomntu ibonakaliswe ngokuchanekileyo ngolo hlobo: ukuphuculwa ngeminwe, ke inkqubela phambili ekukhululeni. Kwaye akukaze kube ngenye indlela.
Yintoni abazali abangayenzayo ukuba umntwana akathethi nonke okanye waqala ukukwenza ngokukhawuleza? Impendulo iyazibonakalisa-kubalulekile ukuphuhlisa izakhono zamancinci zentsana. Ngenxa yale nto kuyimfuneko yokwenza i-massage yeminwe, ukuba ibenze ngokubunjwa kwiplastiki, ukudlala imidlalo yeminwe, ukudweba, ukuhlunga i-groats, ukwenza ubuhlalu, ukukhahlela izicathulo. Unokufundisa umntwana ukuba abonise iminwe yakhe ukuba uneminyaka engakanani.
Kukho uvavanyo oluvumela ukuba uchane ngokuchanekileyo ukuba umntwana uthetha okanye cha. Uvavanyo luqulethwe lulandelayo: ingcali kufuneka ibuze imbuzi ukuba imbonise enye, ezimbini, kwaye iminwe emithathu (iphinda emva kwayo). Ukuba intshukumo yomntwana icace kwaye iyathemba, ngoko umntwana uthetha kakuhle.
Iimvavanyo zamanqanaba ezifundo zamanje zomntwana onyaka wokuqala wobomi
Intsingiselo yamagama abantwana ngamantombazana kwileta "A"
Indlela yokufundisa umntwana ukufunda nokubhala
Umntwana unesaba ukubhukuda
Imiqathango yokwakheka koqeqesho lokuthobela
Ukutshatyalaliswa kwabazali kubantwana
Ukukhula ngonyaka wokuqala wobomi bomntwana
Ukuhlawula amehlo ngelixa usebenza kwikhompyutha
Iibhotile ezibhaka kwiItranshi zaseItali
Iimpembelelo zamahomoni ngokulingana komntu
Ukudlala izibalo kunye nosana usebenzisa ubuchule bePeterson
Unyango lokuphunga iindleko ngexesha lokukhulelwa
Buckwheat kwi-oven microwave
Buckwheat porridge "Bogatyrskaya"
Indlela yokungena ifomula yomntwana umntwana
Indlela yokukhetha i-eyeliner elula
Umvuzo "UKristu Uvukile"
Ngubani uVladimir Putin watshata okwesihlandlo sesibini, iifoto ezintsha zika-2015
U-Nikita Presnyakov no-Alena Krasnova babengabizi izihlobo kunye nabahlobo kwiofisi yokubhalisa, iifoto kunye namavidiyo
Ukuthetha nomntwana emva komtshato
Inobungozi kwaye inzuzo yama-oven microwaves
Ukunqongophala kwetsimbi emzimbeni ngexesha lokukhulelwa
I-Salmon kwintlama yomnwa